DAAWO : War Ragga Kala qabta! Nin Shiici ah iyo mid Sunni ah oo ku kala Aragti duwan Xaaladda Ciraaq oo gudaha Aljazeera isku garaacay.
Wednesday June 18, 2014 - 22:20:49 in Wararka by Super Admin
Barnaamijka "Aragtiyada iska soo horjeeda" ee ka baxa Aljazeera ayaa isku badalay sida goob lagu ciyaaro Ciyaarta Feerka Miisaanka culus, kadib markii ay gacmaha iskula tageen laba nin oo ku kala aragti duwan qodobakii laga doodayay.
Istuudiyaha Al-Jazeera oo dood kulul ka dhacday
Sida caadada ah waxaa Baranaamijkaas oo uu daadihiyo Dr Feysal Al-Qaasim la isugu keenaa laba qof oo qodobka laga doodaayo ku kala ra’yi duwan, waxaana isbuucan Barnaamijka uu ku saabsanaa xaaladda ka taagan dalka Ciraaq.
Waxaa Barnaamij la isugu keenay laba nin oo kasoo jeeda Shiicada iyo Sunniyiinta dalka Ciraaq, waxaa mid ka mid ah uu difaacayay Nidaamka Nuuri Al-Maaliki, halka kan kalena uu difaacayay kacdoonka hubeysa ee dalkaas ka soca, ugu dambeyntiina marka ay doodda billaabatay labadii nin ee martida ahaa ayaa feer isku qaad qaaday ka hor inta uusan soo dhex gelin ilaalada xarunta Aljazeera.